Rikoooo ari kutsvaka rokuzvipira Moderator
Mazvita wakagamuchira: 20
1 gore 3 ago #2 by rikoooo
I'am vachitsvaka munhu iripo kukura uye nokutarisira itsva Chirungu Forum ichi. Uchava anotarisira uye Sachigaro munguva iyoyo, iwe kuchavaka Forum ichi kubva pasi; achiwedzera chikamu, rwezuva uye zvichingodaro, unofanira kuva dzisingatengeswi nguva ino.
- Iwe kutaura Chirungu sezvo chizvarwa kana zvinenge
- Iwe kushanda kana uine nguva nokuti sezvo rokuzvipira
- Unoda Flight Simulators chokwadi
- Muri kupfuura 18 nemakore
- Muri zvakakomba
Ini kuchakubatsira upi hwokugadzira nyaya kana kuvandudzika chikumbiro, asi nguva basa rako woga, unogona kuita pachako chikwata yako Moderators kana uchida.
Mazvita wakagamuchira: 41
1 gore 3 ago #4 by Dariussssss
Ndiri kuda kutora chinzvimbo ichi.
1 gore 3 ago #5 by rikoooo
Ndinokutendai, Ndakatuma email kwamuri. Please kudavira Email.
1 gore 3 ago - 1 gore 3 ago #32 by superskullmaster
Uchiri Looking? Nokuti kana iwe uri ndiri zvose. Vasati Military risati Forum Sachigaro ruzivo, ndiri kushanda avhiyesheni uye ndiri marezinesi munhu & S. makanika ane chakakomba avhiyesheni madiro. Aratidza simming kubva 2003.
Last Edit: 1 gore 3 mwedzi yapfuura superskullmaster. Reason: zvakanyanya zvinhu
1 gore 3 ago #34 by Gh0stRider203
Nokuti Me NOT kuti ichibhururuka pamusoro FSX hariwanikwi Ndakanga pamwe Rikooo nokuda neIkoniyumu Ya asina chokwadi sei refu ikozvino asi zvachose MUDE nzvimbo, uye zviri
Ndiri kuda kuzvipira
1 gore 3 ago #38 by rikoooo
Ndinokutendai zvikuru kuti muri rokuzvipira, muri chaizvo kugamuchirwa pano, handina atsvaka Dariussssss (itsva Forum mutariri) pamusoro candidatures enyu, tinofanira parizvino tinofanira kuvaka chikwata itsva Moderators. Tichafara kudzokera vachikurukura nemi nekukurumidza.
1 gore 3 ago #45 by Dariussssss
Ndafara mose uye welcome kuna Rikoooo Forum. Ndinokutendai mufarire nokutora munzvimbo idzi. Ndichaita kutaura nomumwe wenyu achishandisa tsamba inotumirwa neindaneti. Pashure paizvozvo, Ini achazivisa nhengo itsva arun chikwata.
Zvakare, anobvumirwa Rikoooo.
1 gore 3 ago #47 by Dariussssss
Ndinoda kukubvunzai kunyora pasi izvo ndege Simulator muri zvikuru vanoshamwaridzana. Izvi zvichatibatsira kuziva kuti ndiani ari yakanakisisa munhu kuti akaripira somuzvipiri Moderator pano. Kana uine vamwe chaiyo nyika avhiyesheni ruzivo, kana iwe uri achibhururuka dzimwe ndege Sims, sununguka ngatiregei kuziva.
Kufanana ndakati, uchatibatsira chaizvo.
Time chokusika peji: 0.124 mumasekonzi